ဘယ်တော့ ကြည့်ကြည့်မရိုးတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ(၃)ခု - For her Myanmar
အချိန်တွေကြာသွားတာတောင် ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်ကျန်ရစ်နေဆဲပဲ
ယောင်းတို့ရေ.. မြဝတီချန်နယ်မှာ ကိုရီးယားကားတွေ စပြကတည်းကနေ ခုထက်ထိအောင် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို အားပေးနေသူတွေရှိကြလား? မင်မင်ကတော့ ဒီလိုလူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ… TV Channel ပေါင်းစုံက ပြနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေ မလွတ်တမ်းကြည့်သလို ဟော.. ကောင်းတယ်ကြားတဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလိုကိုလည်း ကြည့်ပါသေးတယ်.. ဒါတင်မကသေး ကိုရီးယားရုပ်သံလိုင်းတွေက အသစ်စက်စက်ပြသနေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်စောင့်စားပြီး ကြည့်လိုက်ရတာ အမော… ဒီလိုမျိုး မင်မင်ကြည့်ဖူးသမျှ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေထဲကနေ ဘယ်တော့မှရိုးအီမသွားနိုင်ဘဲ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ပြန်ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ(၄)ခုကို ယောင်းတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ ၂၀၀၄ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာကြီးလို့ လူသိများတဲ့ မင်းသားချော Kim Rae-won နဲ့ မင်းသမီးချော Kim Tae- Hee တို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ ပထမနှစ် ဥပဒေကျောင်းသား နဲ့ တတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသူတို့ရဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ကောင်မလေးဘက်ကနေ ရုတ်တရက် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားမှာမှ ကံကြမ္မာ မျက်စိလည်ပြီး ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ… သူတို့အချစ်ရေးက ဘယ်လိုတွေ ပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ကြည်နူးလွမ်းမောစရာလေး ရိုက်ကူးထားတာမို့ ဘယ်ခါကြည့်ကြည့် ရိုးအီမသွားတဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> ကြည့်ရင်း ကြည်နူးပြီး ပြုံးနေရမယ့် ချစ်စရာ BL ဇာတ်ကားကောင်း (၃)ကား
ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထဲ့တဲ့ ဒီကားလေးမှာတော့ ဖအေပါ မအေပါ မောင်နှမနှစ်ယောက် အဖြစ် Lee Wan နဲ့ Park Shin- Hye တို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေးရှိတဲ့ ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်သား ရှိတဲ့ ကိုရီးယားအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် အဖေပါ အမေပါ မောင်နှမတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် နှစ်ဦးကြားက ချစ်ခြင်းဟာ ဘယ်လို ကံကြမ္မာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာလဲ?
ဒီကားကို ကြည့်တဲ့ ယောင်းတွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူး… မင်မင်တော့လေ ကြည့်တိုင်း ငိုတာပဲ… ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် ငိုဖြစ်တယ်… ပျော်စရာဇာတ်ကားတွေထက် ဝမ်းနည်းစရာ ဇာတ်ကားတွေကို ပိုပြီး မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကလည်း အတော်မှန်တဲ့စကားနော် ယောင်းတို့… ကိုယ်တွေ စိတ်ထဲ တအားစွဲတဲ့ ဇာတ်ကားတော်တော်များများက ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းတွေ များတယ်မလား…
Related Article >>> ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားရမယ့် IMDB မြင့် မှုခင်း/ထောက်လှမ်းရေး ဇာတ်လမ်းကောင်း (၃) ခု
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ကြည့်နေကျဇာတ်ကား ပုံစံတွေကနေ လုံးဝကွဲထွက်ပြီး မှော်ဆန်ဆန် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ… Hyun Bin နဲ့ Ha Ji-won တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဖော်ထားတာပါ။ စတန့်မင်းသမီးအဖြစ် အသက်မွေးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး နဲ့ CEO တို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာကြောမတည့်ခဲ့ကြပေမဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဝိဉာဉ်လဲသွားတဲ့အခါ…
ဒီကားလေးက ရယ်လည်းရယ်ရသလို ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် သရုပ်ဆောင်တွေချည်း သုံးထားတာမို့လည်း သရုပ်ဆောင်တာ အပိုအလိုမရှိ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတ်ကားပေမဲ့ ဘယ်တော့မဆို ပြန်ကြည့်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တာက သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ပြောရမှာပါ။
မင်မင်ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက လူကြိုက်အရမ်းများခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေချည်းမို့ ယောင်းတို့တော်တော်များများ ကြည့်ဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်… ယောင်းတို့ရင်ထဲ ရိုးအီမသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရှိရင်လည်း ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါဦးနော်…
အခြိနျတှကွောသှားတာတောငျ ရငျထဲမှာ အမွဈတှယျကနျြရဈနဆေဲပဲ
ယောငျးတို့ရေ.. မွဝတီခနျြနယျမှာ ကိုရီးယားကားတှေ စပွကတညျးကနေ ခုထကျထိအောငျ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲတှကေို အားပေးနသေူတှရှေိကွလား? မငျမငျကတော့ ဒီလိုလူတှထေဲမှာ ထိပျဆုံးကပါပဲ… TV Channel ပေါငျးစုံက ပွနတေဲ့ဇာတျကားတှေ မလှတျတမျးကွညျ့သလို ဟော.. ကောငျးတယျကွားတဲ့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလိုကိုလညျး ကွညျ့ပါသေးတယျ.. ဒါတငျမကသေး ကိုရီးယားရုပျသံလိုငျးတှကေ အသဈစကျစကျပွသနတေဲ့ ဇာတျကားတှဆေိုရငျလညျး မြှျောလငျ့စောငျ့စားပွီး ကွညျ့လိုကျရတာ အမော… ဒီလိုမြိုး မငျမငျကွညျ့ဖူးသမြှ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှထေဲကနေ ဘယျတော့မှရိုးအီမသှားနိုငျဘဲ မှတျမှတျထငျထငျ ပွနျကွညျ့ဖွဈနတေဲ့ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲ(၄)ခုကို ယောငျးတို့အတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ…
ဒီဇာတျလမျးတှဲလေးကတော့ ၂၀၀၄ခုနှဈကတညျးက ထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာကွီးလို့ လူသိမြားတဲ့ မငျးသားခြော Kim Rae-won နဲ့ မငျးသမီးခြော Kim Tae- Hee တို့က အဓိကပါဝငျ သရုပျဆောငျထားတာပါ။ ပထမနှဈ ဥပဒကြေောငျးသား နဲ့ တတိယနှဈ ဆေးကြောငျးသူတို့ရဲ့ Harvard တက်ကသိုလျမှာအစပွုခဲ့တဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈခုကို ကောငျမလေးဘကျကနေ ရုတျတရကျ အဆုံးသတျခဲ့ပွီး တောငျကိုရီးယားမှာမှ ကံကွမ်မာ မကျြစိလညျပွီး ပွနျတှကွေ့တဲ့အခါ… သူတို့အခဈြရေးက ဘယျလိုတှေ ပွနျဖွဈသှားမလဲဆိုတာကို ကွညျနူးလှမျးမောစရာလေး ရိုကျကူးထားတာမို့ ဘယျခါကွညျ့ကွညျ့ ရိုးအီမသှားတဲ့ အခဈြဇာတျကားကောငျးလေး တဈပုဒျပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> ကွညျ့ရငျး ကွညျနူးပွီး ပွုံးနရေမယျ့ ခဈြစရာ BL ဇာတျကားကောငျး (၃)ကား
ကိုရီးယားနဲ့ ဂပြနျသရုပျဆောငျတှေ ပါဝငျအားဖွညျ့ထားပွီး ၂၀၀၆ခုနှဈမှာ ထှကျရှိထဲ့တဲ့ ဒီကားလေးမှာတော့ ဖအပေါ မအပေါ မောငျနှမနှဈယောကျ အဖွဈ Lee Wan နဲ့ Park Shin- Hye တို့က အဓိကပါဝငျ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျ သမီးလေးရှိတဲ့ ဂပြနျအမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဆယျကြျောသကျသား ရှိတဲ့ ကိုရီးယားအမြိုးသားတဈယောကျနဲ့ လကျထပျလိုကျပွီးတဲ့နောကျ အဖပေါ အမပေါ မောငျနှမတှေ ဖွဈသှားတဲ့ ဆယျကြျောသကျ နှဈဦးကွားက ခဈြခွငျးဟာ ဘယျလို ကံကွမ်မာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဦးမှာလဲ?
ဒီကားကို ကွညျ့တဲ့ ယောငျးတှတေော့ ဘယျလိုနတေယျမသိဘူး… မငျမငျတော့လေ ကွညျ့တိုငျး ငိုတာပဲ… ဘယျနှဈခါကွညျ့ကွညျ့ ငိုဖွဈတယျ… ပြျောစရာဇာတျကားတှထေကျ ဝမျးနညျးစရာ ဇာတျကားတှကေို ပိုပွီး မှတျမှတျထငျထငျ ဖွဈရတယျဆိုတာကလညျး အတျောမှနျတဲ့စကားနျော ယောငျးတို့… ကိုယျတှေ စိတျထဲ တအားစှဲတဲ့ ဇာတျကားတျောတျောမြားမြားက ကွကှေဲစရာ ဇာတျလမျးတှေ မြားတယျမလား…
Related Article >>> ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ရှုစားရမယျ့ IMDB မွငျ့ မှုခငျး/ထောကျလှမျးရေး ဇာတျလမျးကောငျး (၃) ခု
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ကွညျ့နကေဇြာတျကား ပုံစံတှကေနေ လုံးဝကှဲထှကျပွီး မှျောဆနျဆနျ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးကို ရိုကျကူးထားတာပါ… Hyun Bin နဲ့ Ha Ji-won တို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး ခန်ဓာကိုယျခငျြး ပွောငျးလဲသှားတဲ့ ထူးခွားတဲ့ဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျ သရုပျဖျောထားတာပါ။ စတနျ့မငျးသမီးအဖွဈ အသကျမှေးတဲ့ မိနျးကလေးတဈဦး နဲ့ CEO တို့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မကျြနှာကွောမတညျ့ခဲ့ကွပမေဲ့ ရုတျတရကျကွီး နှဈယောကျသားရဲ့ ဝိဉာဉျလဲသှားတဲ့အခါ…
ဒီကားလေးက ရယျလညျးရယျရသလို ဝါရငျ့သမ်ဘာရငျ့ သရုပျဆောငျတှခေညျြး သုံးထားတာမို့လညျး သရုပျဆောငျတာ အပိုအလိုမရှိ ကွညျ့ကောငျးတဲ့ ဇာတျကားပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတျကားပမေဲ့ ဘယျတော့မဆို ပွနျကွညျ့ခငျြအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျတာက သူ့ရဲ့ ထူးခွားခကျြလို့ ပွောရမှာပါ။
မငျမငျဝမြှေပေးခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှကေ လူကွိုကျအရမျးမြားခဲ့တဲ့ ဇာတျကားတှခေညျြးမို့ ယောငျးတို့တျောတျောမြားမြား ကွညျ့ဖူးကွလိမျ့မယျထငျပါတယျ… ယောငျးတို့ရငျထဲ ရိုးအီမသှားတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှရှေိရငျလညျး ပွနျလညျဝမြှေပေးခဲ့ပါဦးနျော…
Tags: drama, korean drama, love story in harvard, movies review, Romantic, secret garden, series, tree of heaven